/Blog/Kuonda/Nyika Yepamusoro ye10 Yakanakisisa-Kutengesa Kurasikirwa Kwehupfumi Poda kuwedzera
Posted on 09 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora Kuonda. Izvo zvine 58 Comments.
Kuonda Drug History
Yokutanga kurasikirwa kwemishonga, iyo inonzi mafuta ekuchera panguva iyoyo, yakasvika pakupedzisira kwe1800s. Kunyange zvazvo mishonga iyi yakakonzera mamwe madhara akaipa, yakaramba ichiwanikwa kuti ishandiswe kusvikira ku1960s.
Mishonga mitsva inozivikanwa seDinroprophenol yakaiswa muZ1930 uye yakava yakakurumbira pakugadzirisa kurasikirwa. Iyo mishonga yakabudisa hutemogenic mukati momuviri, kuita kuti kurasikirwa kuwedzere.
Pakati pe-1950s, amphetamine yakavapo uye yakashanduka kuve kurasikirwa nemishonga yekusarudza. Yakaita kuti kurasikirwa kwemahombekombe kuve kukanganisa nekudzivisa kudya. Zvinosuruvarisa, yakawedzera ngozi yepemmonia yeupempersion, zvichiita kuti ibve kubva pamusika mu1968.
Mune 1970s, ephedrine yakave yakarongerwa kurapwa kwekurema. Mishonga iyi, zvisinei, yakakonzera kushushikana kwakashata kwakazoita kuti iziviswa kuti inotyisa.
Muna 1973, fenfluramine yakagamuchirwa sekuti kurasikirwa kwekureruka kuwedzera. Kuzivikanwa kwaro kwakasimudzirwa mu1992 apo yaisanganiswa ne phentermine kuumba kurasikirwa kwemazizi kunonzi fen-phen. Zvinosuruvarisa kuti mishonga iyi yakakonzera zvimwe zvinetso zvakashata, izvo zvakaita kuti zvibve pamusika mu1997. Muzana remakore reC21, kurasikirwa kwechiremera chemishonga, zvakawanda zvakabva pamaruva emiti, yakazara mumusika.
Kurema kwehutachiona hwechirwere chechirwere
Kurema kwekurasikirwa zvinodhaka zvinongororwa kuva zvikamu zvitatu zvakakura maererano nemaitiro avo ekuita uye zvinotevera:
(1) Appetite suppressant (Zvokudya)
Zvinodhaka zvinoderedza kudya zvokudya zvinonzi sympathomimetic agents. Vanowanzodzvinyirira chido apo vachiita kuti satiety isati yasvika. Satiety ndiyo "yakazara" kunzwa kana kugutsikana kunowanikwa pakutora zvokudya. Maitiro ekudzvinyirira anoshanda nekutevedzera neurotransmitter muhuropi hwemunhu inodzora chido, inozivikanwa sa noradrenaline (NA).
Iyi mishonga inobatanidza chimiro chakafanana neA NA uye inogona; semugumisiro kusunga kumabiro mamwechete se noradrenaline.
Chimiro chimiro che sympathomimetic agents.
Mishonga iyi inovandudzawo noradrenaline basa mu "nzvimbo yekudyisa" yehuropi hwevanhu, hypothalamus. Munhu hypothalamus anodzora simba rakakwana mumutumbi wemuviri. Izvo ruzivo pamusoro pezvimwe zvekuchengetedza magetsi zvinogadzirwa mu hypothalamus iyo inodzora kudya kwekudya uye chido. Noradrenaline kusunga uye basa mu hypothalamus ine kuderedza kuderedza chido chekudya. Mishonga yakadaro inosanganisira:
Mafuta anopisa kurasikirwa kwemishonga inogona kubatsira mafuta kurasikirwa kuburikidza nekuderedza zvido, kusimbisa metabolism, nekuchengetedza kudya kwakanaka. Vanogonawo kuwedzera kukwanisa kuita basa nekuwedzera simba nekuisa pfungwa. Mishonga yakadaro inosanganisira:
(3) Kuvandudza kudya
Izvi zvinorema kurasikirwa nemishonga zvinoshanda nekupindira nekwanisi yekugadzirisa chirongwa ichi kuti iwane zvimwe zvokudya muzvokudya. Somuenzaniso, Orlistat inozivikanwa kuvhiringidza kuparara kwemafuta uye naizvozvo inodzivisa kudya kwemafuta. Zvimwe zvidimbu zvakawanda zvakashandiswa mukuderedza caloric absorption uye kudzivisa kudya. Muchikamu ichi, tichakurukura zvakawanda pamusoro pemishonga yakadaro inotevera:
Kurema kwesirudzo yezvinodhaka zvinodhaka
Pasi pane tsanangudzo shomanana asi yakajeka yemishonga yose inotaurwa pamusoro apa.
(1) Appetite suppressants (Zvokudya)
Sibutramine HCL ndechimwe chezvinonyanya kuda kudya zvinodhaka. Iyo inokurudzira zvose serotonin uye NA mazinga muuropi, ayo anotevera kusungira kune avo vanogamuchira kuti vatarise satiety uye kudya.
Sibutramine kurapwa pamwe chete nekudya uye kurovedza muviri kunogona kuita kuti 4.6 kg kuwedzere kurashikirwa kupfuura kurovedza muviri uye kudya chete. Pamwe nekuderedza kudya kwekudya, sibutramine akawanikwawo kune:
• Simbisa thermogenesis
• Kuvandudza hutano hwepfungwa
• Kuvandudza hutano hwakanyanya
• Kuvandudza glucose yeropa kune varwere vanorarama nekodhi diabetes
• Kuvandudza huwandu hwepombi
• Kuwedzera mazinga eC-peptide, insulini, uye uric acid
Chimiro chimiro cheSibutramine HCL
Kemikari yakagadzirwa naLorcaserin HCL (Belviq)
Lorcaserin HCl zvinodhaka zvinoshanda kuti zvironge simba rekugadzirisa muviri uye chido. Mushonga wacho wakagamuchirwa neRDA mugore re2012 kune vanhu vane BMI yepamusoro pe30, uye kune varwere vane Body Mass Index ye27 kana vamwe vanowedzera cholesterol, ropa, uye chirwere cheshuga 2. Mushonga wacho unoshandawo kusimbisa serotonin 2CV receptor muuropi hwevanhu inogona kubatsira varwere kuti vanzwe vakaguta mushure mekutora zvishoma.
Mune miedzo yezvechiremba, 38% yevanhu vakuru (vasina chirwere chechirwere cheshuga 2) vakarasikirwa kupfuura 5% yemuviri wavo, pakuenzanisa ne16% yevakuru vakarapwa ne placebo.
Chimiro chimiro cheRimonabant HCL
Rimonabant HCL zvinodhaka zvakajeka nokuda kwomuitiro wayo wekuita sechisarudzo chisingaenzaniswi chinokonzerwa ne-cannabinoid-1 (CB-1) chinogamuchirwa. Endocannabinoids inosunungurwa muCSS uye inokurudzira lipogenesis, chido chekudya, uye kuunganidza mafuta mumhepo. IRimonabant HCL inoshanda kuti igadzirire endocannabinoids madhara.
Mushonga wacho unopinza nokukurumidza mushure mekutaura kwemuromo. Kubudirira kwechirwere ichi mukurapa vanyoro kana kuti kunyanya kuwandisa varwere kwakadzidzwa mune purogiramu yemayeri mana akachengetedzwa, anoromized, anozivikanwa seRIO (Rimonabant in Obesity) purogiramu. Mune miedzo iyi, Chirwere ichi chakawanikwa sechishanda se orlistat uye sibutramine.
2,4-Dinitrophenol (DNP kana 2,4-DNP o) inonzi organic makemikari ine chimiro uye chimiro chimiro: HOC6H3 (NO2) 2.
DNP inoshanda seprotonophore, ichiita kuti maprotoni adye mukati maro mukati memitochondrial membrane saka inodarika ATP synthase. Izvi zvingaita kuti ATP energy isanyanya kuderera. Somugumisiro, mamwe emasimba anoshandiswa kubva kumhepo inoputika anoparadzwa nenzira yehuni.
Izvo zvisina kukodzera zvakaenzana zvakananga nemutengo wemishonga inotorwa. Sezvo mushonga wemishonga unowedzera, kukosha kwesimba kunowedzera kusagadzikana, mutengo wemagetsi unomutsa (uye huwandu huwandu hwemafuta hunopiswa) kuti huwane simba rekutsvaga uye kubhadhara kusakosha. DNP ndeimwe yepamusoro-soro mujeri anozivikanwa pakusunungura phosphorylation inokonzera. Phosphorylation ye ADP neAtp synthase inotanga "kusvibiswa kana kubviswa kubva pakisanganiswa.
Compound p-synephrine is alkaloid. Izvi zvinoreva kuti iyo inhengo yehupenyu inogona kuwanika mumasikirwo asi kuderera zvakanyanya. Iyo kemikari ine nitrogen senheyo.
Chimiro chimiro che synephrine
Caffeine, nicotine, uye morphine zvakare ndeyekirasi yealkaloids maererano nevatsvakurudzi. Synephrine inowanzoonekwa muzvokudya zvekudya zvinokonzera kuyerwa nekurema kana kurasikirwa uye mitambo yekuita.
Synephrine anoshanda sei mumuviri wedu?
Makemikari mu-p-synephrine anokonzera hurongwa hwemagetsi nekukurudzira β3 adrenergic receptors iyo inobatsira zvikuru mu thermogenesis uye inopolysis mumafuta ane mavara. Izvi zvinoreva kuti izvi zvinogamuchirwa zvichaita kuti hurongwa hwako hutsve mafuta nekuda kwesimba.
Dimethylamylamine chirongwa chinogadzirwa zvakagadziridzwa mubazi. 1,3-dimethylamylamine (DMAA) inogadzirwa nemamphetamine yakashandiswa zvakanyanya mumitambo inowedzera inotengeswa muUnited States Yakanga iri kushandiswa pakutanga sechirongestantine yemasine. Mazuva ano, dimethylamylamine inoshambadzirwa semishonga inoshandiswa pakurasikirwa, ADHD (kucherechedza dambudziko rehutachiona hwehutano), kuvaka muviri, nekuvandudza kushanda.
Clenbuterol, Uyewo anozivikanwa seClen, inonzi decongestant uye bronchodilator. Inowanzoshandiswa kuchengetedza kurwisana nechirwere chemafi. Iyi iyi steroid-like compound, asi kwete steroid chaiyo. Inowira muboka re β2 agonists.
Clenbuterol inogona kutanga maitiro ehupenyu akafanana neAdrenaline. Iyo inobatsira beta-2 receptor subtypes mune imwe chirongwa chedrenergic. Izvi zvinokonzera kuwedzera kwemugomba (ATP's inogadziriswa inoda kuti mutauriri-mutauriri wehurukuro). Somugumisiro, protein kinase A inowedzera. Protein kinase A is enzyme inoronga lipid, glycogen, uye shuga metabolism. Kuwedzera kwayo kunoita kuti mafuta aipise mumuviri. Inokurudzira dzimwe nzira dzinobatsira pakupisa mafuta kuburikidza nehutano hwehupenyu hunozivikanwa se fatty acid oxidation.
Mafuta akapiswa zvino inoshandiswa senzvimbo ye simba yekuita mabasa emuviri. Iko inokurudzira mitochondria kusunungura ATPs, zvichiita kuti kuwedzerwa kwehuwandu hwemagetsi. Inonyanya kuzivikanwa kuti kuwedzerwa kwehuwandu hwemetabolism inobatsira mukurema kwekukura.
kemikari yakagadzirwa naSalbutamol (Albuterol)
Salbutamol imishonga inobata chirwere chisingaperi chinoparadza zvirwere uye chirwere cheputi uye zvimwe zvirwere zvine chokuita neCOPD. Mishonga yemararamiro ekuvhura iri kuzarura kana kuputika mapapu 'kufema kufema panguva yekurwadza kwechirwere chemafi. Sezvo Salbutamol ine simba rinokurudzira, vamwe vanhu vanoshandisa ichi chirwere chechirma kukurudzira mafuta kana kuora muviri.
Albuterol yakakosha kuti ishandiswe mukurema kweprogram purogiramu nokuti ine zvimwe zvakafanana pane uyerogenic system sekuita muviri. Iyo inovaka huwandu hwemisungo uye inoderedza huwandu huwandu.
Yakashandiswa nevarimi vemiti kuti vape mafuta akawanda kubva munzvimbo dzomuviri wavo izvo zvingave zvakaoma kudzora kana kurasikirwa mafuta kuburikidza nemamwe nzira. Paunotora ichi chirwere chekuvaka muviri nekurema kwekuita mabasa, inowanzotorwa mupiritsi kana mazai emvura. Kunyangwe iwe ungashandisa Salbutamol inhaler kurema kana mafuta kurasikirwa kana ihwo chete sarudzo inowanikwa.
Orlistat inonyanyisa pancreatic uye gastric lipase inhibitor. Zvose zvekudya zvinonzi triglycerides zvinogadziriswa nemubatsiro we pancreatic uye gastric lipases. Iyo inopisa enzymatically inoputsa pasi triglycerides muhusununguko husina mafuta acids iyo inogona kuve yakabatwa mumatumbo maduku. Gastric uye pancreatic lipase inhibitors zvakagadzikana nesangano repancreatic uye gastric lipases mu lumen yemukati muduku uye mudumbu zvichiita kuti ma enzymes aregone kushanda zvakanaka.
Kuburikidza nekudzivisa kwechiito chezviputika izvi, kudya kwemafuta kunodya kunodzivirirwawo, uye triglycerides inowedzerwa mumucheka. Orlistat kurasikirwa nemishonga kunodzivirira kumativi ose 30 muzana yemafuta ane utano kubva pakudya kubva pakupinda mumuviri wemunhu (apo 30 muzana yezvokudya muzvokudya zvinopiwa ne triglycerides). Ivhareji inorema kuderedza mushure megore rimwe nekubatanidzwa kweXenical (orlistat) uye kuchinja mumararamiro ehupenyu kune kambani 8.5 kg.
Pamwe nekudzikisa kudyidzana kwezvokudya zvinonzi triglycerides, orlistat kurasikirwa kwehupfu kwakawanikwa ku:
• Iva nemigumisiro yakanaka pamubhadharo weropa;
• Kuderedza cholesterol kunyanya uye saka cholesterol mazinga (pamwe neLDL cholesterol);
• Kuvandudza insulin kudzivisa; and
• Kukurudzira glycemic control.
Zvinonyanya kufungidzirwa kuti orlistat yemavhu inokonzera matambudziko anoshanda nenzira yakafanana nekusimudzira kusagadzikana, izvo zvinokurudzira avo vari pamishonga iyi kuti vateerere zvakakwana kudya kwakaderera-mafuta.
Cetilistat inomirira mumuromo, inova, pancreatic uye muviri lipase inhibitor.
Cetilistat kurasikirwa nekurasikirwa kwemishonga chirwere chinogadzirwa kurapa kuneta. Inoshanda nenzira imwecheteyo sezvakaita mishonga inokurukurwa kare inonzi Xenical (orlistat) nekudzora pancreatic lipase, iyo enzyme inoputsa triglycerides mumatumbo edu. Pasina idzi enzymes, triglycerides kubva kuzvokudya zvedu inodziviswa kuti irege kudyiwa muhurukuro yemafuta inogona kushandiswa uye inobviswa kubva mumuviri usina kupfuura.
Mumakiriniki ekuedzwa kunosanganisira varwere vanorema vasina chirwere cheshuga 2 uye mune varwere vakanyanya vanorarama nechirwere cheshuga 2. Apo Cetilistat kurasikirwa kwemafuta kwakapiwa kwemavhiki gumi nemaviri, zvakakosha zvikuru kuderedza muviri, huwandu hwecholesterol, serum low-density lipoprotein cholesterol nokukurumidza pakuenzanisa ne placebo.
Izvo zviyero zvevarwere vanorema zvakaratidza kuderedzwa kukuru muhutano hwekutanga hwemuviri wehutori huwandu hwe5 hwepamusoro hwakanga hwapamusoro pane zvese zvakashanda zvichienzaniswa ne placebo. Mukuwedzera kwehuwandu hwevanhu vane chirwere cheshuga, HbA1c (glycosylated hemoglobin) mazinga akanyanyawo kuderedzwa. Cetilistat kuora kurasikirwa kwemishonga kwakaratidza kuenzanisa kusvika kune zvinorwadza zvakanyanya, zvinowanzokonzera steatorrhea (kushaya muviri) uye ine chirwere chakanyanya kupfuura icho chiri mu orlistat. Iyi mishonga yakanga ichangobva kugamuchirwa muJapan kunobata kuneta nekumwe matambudziko.
Kurema kwehupfumi kupfupiswa kwehupfu
Sezviri kuonekwa kubva pane zvatakanyatsokurukurirana, pane zvakawanda zvinorema kurasikirwa nemishonga kunze uko izvo zvakabva kune dzakawanda zvakasiyana-siyana masangano. Mishonga yemishonga iyi yakawanikwa ichibudirira, uye dzimwe dzadzo dzakagamuchirwa nemitemo dzakasiyana-siyana dzakadai seDefA neJapane, kutaura zvishomanana, pakurapa kuneta.
Mushure mokupedza maawa mazhinji tichitsvakurudza pamusoro pekureruka kwezvinodhaka zvinodhaka, takakwanisa kuziva humwe huwandu hwe2018 Huru-Kutengesa Kurasikirwa Kwehupfumi Hwezvokudya. Izvi zvinorema kurasikirwa pfupa zvinowedzera zvinosanganisira orlistat kuora kurashika uye lorcaserin kuora kurasikirwa powder. Kusiyana nehupenzi hwekurasikirwa kwekureruka kunowanikwa pane chero dhaka rekushandisa zvinodhaka, mishonga iyi inorema kurasikirwa yakave yakatemwa nevanoshanda mune zvehutano vakapfuura nemakore ekuedzwa kuti vawane chidhori chekubvumidzwa kubva kune FDA nedzimwe mimwe mitemo. Tinokurudzira zvikuru kuti iwe uedze mishonga iyi nokuti yakaratidza kuti haina kungoshanda chete asiwo yakachengeteka kushandisa.
Yakanyorwa References list:
Mhinduro ye58 Comments
Ndinofarira kuti kune mishonga yakasiyana yehutema inopisa nekudya. Kuita kuti vashandisi 'insulin kudzivisa uye glycemic control ane simba rakanaka zvikuru pakuchinja kwavo mumuviri. Ndinoda kuziva asi kana varwere vachida kuvimba uye kugara pamishonga iyi yehupenyu. Ndinoda kuona chidzidzo pamusoro pemazuva ekupedzisira.
Inonzwika sekurema kwekuresikirwa kwekuwedzera zvinowedzera kuvandudza nekushanduka kwekufamba kwenguva. Ndinogona kuva nehanya kana pane chero kuchengetedzwa kunodiwa nekusanganiswa chero ipi zvayo yemishonga inotaurwa kubva kumapoka akasiyana. Ndinotenda nekugovera iyi chinyorwa.
2018 yakanakisa kutengesa uremu kurasikirwa kuwedzerwa kwakaedzwa uye kuvimbwa. Ndinofunga vanhu avo vanonyatsoda izvi, vanofanira kuzviedza kunze.Ndine chokwadi kuti ichashanda semashiripiti.
Kune zvakawanda kuora kurasikirwa kunowedzera vapeji mumusika. Kuva vakatendeseka, ndakataura nemuzhinji pamberi uye AASraw zvakakosha kuvaka ushamwari, ndinofungidzira.
Wow, urongwa uhwu hwakanyanya kukura. Ndinofunga kuti iye zvino ndava kuziva kuti ndechipi chekureruka kwekureruka kwandinoda ini. Handina kumboziva kuti kune marudzi akasiyana maererano nebasa / chinangwa. Ndatenda.
Ndakanga ndisingatendi chaizvo mu "magic" shure kwekureruka kwekureruka kuwedzera. Asi izvozvo zvakachinja pandakaedza orlistat! Ndinofunga kuti ndicho chakanakisisa mune urongwa urwu.
Mhoro paChipo, unogona kutumira zvaunoda kune yedu inochema email (king@aasraw.com) kana uchida chero uremu hwekudzora hupfu. Kwekunyorerwa kana pamusoro payo counter, zvinoenderana. Ini ndichaedza zvandinogona kuti ndikubatsire kutora asi zviri nani kukumbira chiremba wako kuti akurudzire mazano.
Hungu, Vatengi vedu vakawanda vane chirongwa chekurasikirwa kwehupfumi powder.they inoti inoshanda zvakanaka uye inoivada. Kana zviri zvehutano, zvinodaro, mishonga yose ine migumisiro yakadaro.Naizvozvo inoda kutora kuyerwa nenzira yakarurama pasi pevangororo dzako.
Kune zvakawanda zvakakosha kurasikirwa poda mumusika uye kuwana chivimbiso chinoshanda chinetso chikuru. Ndinoziva vanhu avo vakaedza zvese kushaya kurasikirwa kwekuremera kunowedzera kunze kwekuchinja kupi. Ndinofungidzira kushanda kunze kunofanira kuva ndiyo nzira yekutanga yekurashikirwa mafuta nenzira yakatarwa usati watora chero mishonga yemishonga.
Captain U09 / 20 / 2018 pa 10: 28 pm
Ndinogona kutora izvi nokuti ndinoda kubva kunze kwekudzimbirwa. Ini ndinogona kuchenesa maitiro angu uye kuderedza zvigadziriro zveBhowel zvingaita zvinyengeri.
Mach09 / 20 / 2018 pa 9: 25 pm
Kurasikirwa kwekurema kwagara kuri nyaya iyo munhu wose anoda kuonekwa zvakanaka. Ndinonzwa semafungiro aya haazomboregi. Kufunga pamusoro pevhidhiyo kwave kuchiita kuti mharidzo yekutarisa yakanaka nguva dzose. Saka ndinofungidzira kuti ini ndinoda kushandisa uremu uhwo kurasikirwa poda kana mafuta kurasikirwa mapiritsi kuti zviite kuti uoneke zviri nani
Clenbuterol uye Salbutamol inzwi rinoshanda zvakanyanya pakurapa kuneta nekuvandudza mabasa emuviri. Kakawanda, zvigadzirwa zvakadai sezvizvi zvinoratidzika zvakakosha uye zvinoshandura mukugadzira hutano iwe.
Ndinoda kuva akakodzera sezvinoitwa nemukadzi kumusoro! Ndinodikanwa kuti iyi yekuwedzera yakave yakatemerwa nevechiremba vanogona kugutsikana nehukuru hwavo. Zvakawanikwa nevarwere vakanyanya zvakanyanya kufadza. Ndinotenda nekugovana!
Bianca Lively09 / 20 / 2018 pa 5: 56 am
Ndakanga ndisingazivi kuti kuora kurasikirwa kunowedzera kune maitiro akasiyana-siyana. Ndaifunga kuti vose vakanga vari kupisa mafuta asingadiwi! Ndinotenda nekugovana!
Wow, kuora kwekureruka kunodzokera shure kuZ1800s? Handina ruzivo pamusoro pezvimwe zvinowedzera uye ini ndiri kuedza kukanda uremu, saka ndinovonga nokuda kwenyaya iyi inodzidzisa!
Ndatenda nokuda kwezvenyu! Zvinhu zvakawanda zvezvinhu zvitsva zvekutsvakurudza pamusoro pekubvisa marimba emafuta uye kuti ungarasikirwa sei nemafuta emuviri, nezvimwewo.
Ndinokurudzira kushandiswa kwemafuta ose ekurasikirwa kwekubatsira sezvo yakapfuura makore ekuedzwa uye yakachengetedzwa yakachengeteka uye inoshanda. Izvo kuora kurasikirwa kweupfu kunogona kuva muviri wako mafuta zvinopisa, zvinodhaka zvinodhaka kuti uwedzere kurasikirwa, ini ndinowedzera nzira iyi yekurasikirwa mafuta. Tinogona kuvimba naro kuti tishande.
bola09 / 20 / 2018 pa 2: 04 am
Certilistat chimwe chimwe chinhu chakanaka chinowedzera kuti varwi vanofanira kushandisa.Ndinofunga kuti zvichava zvakanaka munguva refu apo mafuta omuviri ari kunyanya kusununguka.
Ini ndichakurudzira Lorsearin kune avo ane ropa neropa uye zvakanyatsonaka kune vakanyanya kudya. Izvo zvichabatsira kudzora chishuwo uye kumhanyisa metabolism.
unoda09 / 19 / 2018 pa 10: 37 pm
Olistat ichava yakanaka kwandiri, iyo inotengeswa mumusika sekudya kwepill pill. Ndinofanira kuedza izvozvo kunze. Sezvo zvichabatsira kubvisa mafuta kubva pakudya.Ndichada kudya kuchiwedzera kukupisa.
Orlistat inonzwika seimwe nzira yakanakisisa yekuderedza uremu, ndakanga ndisati ndambonzwa nezverudzi urwu rwemishonga asi ndinofunga kuti dzinobatsira zvikuru uye dzichabatsira vanhu vazhinji, pamwe chete nekugadzirisa muviri uye tsika dzakanaka dzekudya.
Pane munhu angashandisa zvinorema kurasikirwa nemishonga here? Ndinoreva here kuti kune humwe hutano hwandinofanira kufunga pakutanga? Ndinofunga kuti mashoko anokosha apa asi, yakanaka post zvachose.
Izvi zvinowanikwa kwose kwose ikozvino here? Chirongwa chepamutemo kana kupfuura peji? Ndinoshuva kuti tine rudzi rwehuwandu hwemashoko apa. Chero zvazviri, zvisinei mishonga yemishonga yose iri pano.
Handina ruzivo rwekuti kurasikirwa kwehupfumi hwepoda ndiko kwakasimba. Ndinofunga kuti iwe uchiri kuda nguva dzose yekurovedza paunotora izvo zvinowedzera. Kunyange zvakadaro, ndakanakidzwa nokuverenga bhulogi!
Rae09 / 19 / 2018 pa 8: 28 pm
Ndiri kufarira zvikuru kuti ndingarasikirwa sei nemuviri wemimba. Zvimwe zvigadzirwa zvandinoziva ndezvikwangwani saka ndinoverenga mavara. Ndinokutendai nokuda kwenyaya inodzidzisa! Iko kunondibatsira chaizvo kuziva kuti kurasikirwa kwemazimbisi zvakakurumidza sei
Landen Burrows09 / 19 / 2018 pa 3: 17 pm
ICetilistat uye Clenbuterol zvinowanzofadza mukushandura kwavanoita kubuda kwemuviri. Cetilistat, zvakanaka kunaka kudya muviri, clen inogona kubatsira muviri wako kuva mafuta kupisa. Ndaigona kuona varwere vachikumbira kurasikirwa kwemafuta kunowedzera, sezvo kune zvikoro zvepiritendi zvakaratidzwa vouching kwavari.
Izvi zvinoshamisa zvinowanikwa! Kuva nemigumisiro yakanaka pamubhadharo weropa uye kukurudzira kugadziriswa kweglycemic kune zvakakosha zvinogadzirisa kuwana muwedzere. kuora muviri kurasikirwa, zvirongwa zvekuita basa, zvirongwa zvezvokudya, nezvimwewo izvi zvinotyisa nyaya uye ndinozvida, ndinofunga kuti zvinobatsira kuti nditange kupora kwangu kurasika. Ndinotenda nekugovana!
Handina kumboedza kumira kurasikirwa, uye ini handizvioni ndozviedza munguva inotevera. Ndinowanzoenda pane kudya kwakakomba, ita koriori inowedzera uye kukanganisa kwekoriki uye kushanda zvakaoma muimba yekurovedza. Kurasikirwa kweuviri, zvakagadziriswa.
Ndakanga ndisingatyi mukuedza kuora kurasikirwa, asi ino nenyaya neimwe nzira yakandipa mhedziso yekuti inoshanda sei, uye sei. Kune mishonga yakawandisa kunze uko, kuti iwe unofanirwa kujekesa izvo zvinoshanda kwauri zvakanakisisa. Kuongorora vanachiremba kunogona kunge kwakatanga kutanga zvakare.
Orlistat akashandisa magetsi ayo kwandiri. Ndinotenda kurasikirwa kwekurema hakusi zvose nezvezvinodhaka chete. Tinofanira kuisunganidza pamwe nekuita muviri uye utano hwakanaka / hutano kuti tinyatsoona zvatinoda.
Oo, mishonga iyi yose inotyisa. Wanga uchiedza kuora ure kwemakore e2 ikozvino, uye kusvika ikozvino handisi kuona zvibereko. Zvichida nguva yangu ndinoedza kutora kuora kurasikirwa.
Hi shamwari, usafunganya. Mishonga yose ine migumisiro sezvatinoziva. Asi iyo inogumira. Iwe uchawana mamwe mafaro kubva pakurema kwekurasikirwa poda kana iwe uchivatora nenzira yakarurama uye zvingave zviri nani kuwirirana nemitambo. Vamwe vatengi vakaraira svutramine powder uye lorcaserin powder kubva kwatiri, vakati vakashanda zvakanaka uye ndivo vanorudo kwazvo.
Ndatenda maongororo ako. Mishonga yose ine madhara. Izvo zvinoenderana. Asi ndinofunga lorcaserin powder uye orlistat powderat ichava mazano akanaka mauri maererano nezvakawanikwa nevatengi vedu. Kunyanya kune lorcaserin, yakambotaurwa ne BBC munguva pfupi uye ine zviduku zvishoma.https://www.bbc.com/news/health-45319393
Ini handifunge kuti pachave nechinhu chinokuvadza pamusoro pekutora chero cheuviri uremu hwekuwedzerwa zvekuwedzera sezvo chakagumirwa neFDA neJapan .Zveshuwa zvezvirongwa izvi zvinofanirwa kushandiswa kurasikirwa uremu, nekuti vari kurasikirwa nemafuta nekukurumidza. Kuwedzera uremu kurasikirwa kwekudya chirongwa, iwe unogona kupisa iwe mafuta nekukurumidza.
Zvaive zvakanaka kwauri kuratidzira zvakanakisisa kuora kurasikirwa. Ndakaverenga mibvunzo yakaita seyi pamusoro pekurasikirwa maforamu uye mhinduro dzinonzwisisika hazvipi zvakapiwa. Ndinotarisira avo vanoda chaizvo ruzivo urwu kuti vaone.
Ndinoda kudya uye kunwa, saka kurasa uremu nguva dzose kune hanya neni. Kana izvi zvichiwedzerwa zvinokwanisa kuchengetedza muviri wangu pasina kuenda kune kudya, zvino zvakanaka kuti ndinogona kuwana chikamu ichi. Ndatenda!
Handina kumboedza kumira kurasikirwa, uye ini handizvioni ndozviedza munguva inotevera. Ndinowanzoenda pane kudya kwakakomba, ita koriori inowedzera uye kukanganisa kwekoriki uye kushanda zvakaoma muimba yekurovedza. Kurasikirwa kweuviri, zvakagadziriswa. Asi vamwe vevanhu vakaoma vandakaona, zvakaoma kuti ivo varasikirwa nehuremu, nokuti kungovimba nehutano uye kukora koriori inenge isingakwanise kusvika kuhukuru hwavanoda. Zvichida uremu hunorasikirwa mapiritsi hunogona kuvabatsira.
Zvose zvakabhedha mbatata dzinofanira kutora ichi chemishonga zvakanyanyisa uye kuona kuti vanogona sei kurasikirwa nehupfumi pasina kunyanya kushungurudzika kunyanya kune izvo zvisingabatsiri. Ita zvirongwa zvekudya zvevarume, vaudze kuti vadye kudya kwakanaka, kudya kudya kwakanaka. Kuderedza uremu nokudya haisi nzira yekutsvaga yekurasikirwa mafuta
Ini ndinofanira kutanga ndakumbira chiremba wangu kana izvi zvakachengeteka kuti ini nditore. Izvi zviripo nanhasi here? Kutaura chokwadi, ini ndangoziva zvishoma nezve sibutramine uye orlistat poda kubva kushamwari yangu. Ini ndinofunga kuti ndinofanira kudzidza zvakawanda wozoita chimwe chinhu.
Ndiri kufara kuti iwe unogona kutendesa kuti zvigadzirwa izvi zvakachengeteka uye zvinobudirira kushandisa. Zvinodzvinyirira kudya seSibutramine powder neLorcaserin powder zvinoita sechinhu chinokosha pakubata kwavanoita pfungwa nemuviri. Ndaigona kuona mishonga iyi ine simba rekuvhiringidza pamararamiro evanhu nezvose zvitsvakurudzo kuti zvikweretwe.
Zvakanaka izvi izvi zvose zvave zvichiratidzwa kuti zvinoderedza kuora muviri. Zvinoshamisa kuti vamwe vavo vanoshanda seOrlistat uye Synephrine nekudya uye kupisa mafuta. Ndinotenda nekugovana!
inonzwika zvakanaka, asi ine zvine migumisiro yakazara pamusoro pekurema asi kunyanya kunetseka pamusoro pemakumbo kunogona kuderedzwa zvimwe zvikamu zvose zvemuviri zvikakosha, zvakadai sa sibutramine, ndinoda kuedza vamwe asi ini ndinonetsekawo nezvakavhiringidza. Ndibatsire?
Izvi zvinogona kuponesa upenyu, ini ndichaita kuti mhuri yangu neshamwari zvizive izvi. Ndinoreva kuti tinoda kuve nechokwadi kuti chero chii chatinenge tichitora kurashikirwa kwehupfu hakuzokonzeri kukuvadza kwoutano hwedu.
Ini zvakanyanya ndakatora zvakawanda zvekuwedzera asi hapana chakamboshanda neni. Uye dzimwe dzadzo dzakakonzera mamiriro akaipa akaipa. Zvakanaka kuti nyaya ino inoratidza ruzivo rwakanyanya pamusoro pekuwedzera. Ndinotarisira kuti ndinokwanisa kuwana kuti ndiedze imwe kuora kurasikirwa poda uyewo kudzivisa mamwe madhara. Chero hupi mazano?
Fatty Patty09 / 18 / 2018 pa 9: 37 am
Yaiva pahwendefa yakagadzirwa nehuta orlistat. Haikwanisi kudya chero mafuta ekudya, cheese kana KFC! Ini ndinopedzisira ndave nemakumbo emimba uye ... munoziva. Hahaha
Mafuta eOrlistat ane maitiro akanaka pamusana pokurasikirwa uye ini ndaiziva mumwe munhu akanga aripo.
Ndinofanira kuedza Lorcaserin HCL powder sezvo yakakosha kwazvo kwemetabolism uye inogonawo kudzivisa kuda kwekudya. Kubvisa zvokudya kunogara kuri dambudziko rangu guru.
runyararo09 / 18 / 2018 pa 8: 39 am
Iyi nhoroondo ndeyangu kwandiri kubva pandinofanira kuedza kurasikirwa kwenguva refu zvino. Iyi mamiriro acho panguva yakakodzera ichafanira kusarudza zvakanakisisa zvinowedzera mafuta zvinoshandiswa kushandisa. Ipapo ini ndichafunga nezvekurema kweropa rinopera ini uye ndozvitenga munguva yemberi iri pedyo.Iyo inzvimbo inotyisa.
Ndakatora laxative ndisati ndaderedza uremu. Zvisinei, ndinofungidzira kuti ine mhinduro yakaipa kwandiri saka ndinorega kuitora. Ini ndichiri kunetseka pamusoro pekurehwa kwemahombekombe ekuwedzera.
Ndakamboedza akawanda ekuremerwa uremu zvekuwedzera asi zvinosuwisa kuti havanyatso kundishandira. Ndatenda nekuda kwechinyorwa ichi chinodzidzisa. Kubva pari zvino, ndiri kufananidza muviri wangu nemabatirwo auri kuita.
Ndiri kushamiswa zvikuru kuti pane zvakawanda zvekureruka kurasikirwa supplement powders kunze mumusika. Wanga uchifunga nezvekutora rimwe zuva rimwechete kuti uwane upenyu hwangu hunosarudzwa. Zvisinei, zvinoratidzika sekuti ndinoda zvinyorwa zvakasiyana-siyana kungozvitenga kunyange kubva pamba? Kana kuti pane mimwe mishonga yandinogona kuwana kunze kwekudiwa kwezvinyorwa?
Kurema kwekurasikirwa powder kungasave kwakanaka kune vose. Vanhu vanoenda kune dzimwe mishonga mukurema kwemafuta ekudzvara vanofanira kutarisa zvigadzirwa zvepanyama.
Bran09 / 17 / 2018 pa 11: 40 pm
Nyaya yakanyatsorongeka yenyika yakanakisisa kuora kurasikirwa kwekuwedzera. Ndinoda zvigadziridzo nokuti pane nguva dzose inoshanda zvakanyanya kunyanya kana kutonga kwepfungwa uye maitiro akanaka ekuita basa kunowedzerwawo zvakare.
Ichi ndicho chimiro chakanaka kwandiri, ndiri pane rwendo rwekureruka uye ndakave ndichirwisana nechiremera changu kubva kuchikoro chesekondari. Ichafanirwa kutarisa Sibutramine HCL (Meridia) CAS.iita sokuti ichava izvo ini
Kune mishonga yakawanda kwazvo iyo inobatsira pakurasika. Iyi mishonga inoshanda zvikuru.
Mami + kushanda uye zvechokwadi kudya kwakakodzera ndiro zvombo zvangu mukurasikirwa. Kunyange zvazvo ndakaiisa ikozvino kuti ndichengetedze mafuta akawanda. Zvichida kana ndikadzokera kune zvandinogara ndichashandisa izvi.
Iko kunouya sei munhu asingatauri nezvemishonga? Ini nguva dzose ndiri pano rutivi rwemuviri kana rutivi rwekudya mune zvekudya mune zvinoenderana nenyaya iyi asi ino ndiyo nguva yokutanga iyo meds iri patafura. Zvimwe zvinowedzera asi zvakadaro. 2
Ndiri kuedza kurasikirwa nehutano saka ndinofara zvikuru kuti ndakasangana nenyaya ino inopa ruzivo rwakanyatsotarisana pamusoro pekusarudza kuenzanisa kukodzwa kurasikirwa. Izvi zvinondipa humwe hutano hwekodhi-hype umo ini ndinogona kuita sarudzo yakanakisisa kwandiri. Ndatenda!
I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika we2018	I7 Best Nootropics (Smart Drugs) mumusika weArmodafinil